5 Fomba ianao Fanimbana ny Bath Towels
Be Loatra Amin'ny nanasa DETERGENT
Nahoana izany olana: Be loatra ny DETERGENT raha ny marina dia afaka stiffen towels. Plus, tsy ilaina. "Efa mandray residual Towels savony avy ny vatantsika, ary satria ry zareo ampiasaina mba maina hoditra madio, tsy misy fa be vovoka", hoy Donna Smallin Kuper, voamarina trano fanadiovana teknisianina sy ny mpanoratra ny Fanadiovana Plain & Simple.
Vahaolana: Use half the detergent you would need for a normal wash, or skip it “every couple of washes and just use vinegar,” says Carolyn Childers, chief home officer of Handy, a website that connects you with house cleaners and handymen in your area. “If you must use extra detergent for very soiled towels, make sure to change the washer settings, so it’ll have an extra long rinse cycle.”
Mampiasa Fabric Softener
Nahoana izany olana: Fabric softener towels tena manakana tsy mitroka ny rano, ary mety hamela waxy buildup.
Vahaolana: Skip ny softeners avokoa. Buy vitsivitsy baolina fanamainana (madio koa ny baolina tenisy miasa) mba hanipy any an-fanamainana, manolo-kevitra Childers. Toy ny baolina Aza kivy manodidina, dia Ho avy nandresy misy vongan sy fluff ny towels. Raha toa ka efa tafiditra softener tsy nahy sy ny towels hivoaka amin'ny sisa, Kuper fahazoan-dalana hiditra rewashing azy ireo tamin'ny antsasaky ny kapoaky ny vinaingitra. Raha ny softener efa nandao ny fofona, rewash amin'ny antsasaky ny kapoaky ny fanaova soda.
Mampiasa ny lamba famaohana ny Esory Makeup
Nahoana izany olana: Eyeliner smudges amin'ny sarobidy linens dia unsightly-ary tena sarotra ny hanaisotra. "Makeup mety maharitra stains raha tsy voatsabo marina," mampitandrina Missy Tannen, mpiara-manorina ny orinasa rongony fotsy voajanahary lafo vidy Boll & Sampana.
Vahaolana: Ampiasao ny makiazy fanesorana hamafa, tsy lamba famaohana, mba hahazo ny asa natao. Ary raha misy vahininy efa nahafoy lokomena soritra eo amin'ny tsara linens, tandremo tsara ny Mitifitra iray mialoha ny fitsaboana ny olana eo amin'ny faritra. Raha tsy misy izany, dia tanteraka maina Mandroa, dia mety hahatonga ny tasy izay hafahako. Raha ny tasy no mahavoky, mialoha hitondra izany amin'ny Dawn manga dishwashing ranon-javatra, hoy Kuper.
Manasa Towels in Rano Izany Too Hot
Nahoana izany olana: Hot rano faran'izay ambony indrindra dia hahatonga ny towels ho lefy sy hahazo hangidihidy. Ny loko in miloko towels mahatonga azy ireo bebe kokoa mora io olana io, raha ny marina raha towels fotsy mandray soa avy amin'ny hafanana ambony kokoa. Raha ny marina, araka ny Kuper, mafana tsingerin'ny miaro ny fotsy madio mangalahala tsara kokoa noho ny eau de javel.
Vahaolana: Sasao ny miloko towels amin'ny fampiasana rano mangatsiaka faha-7 Generation Energy Smart Voajanahary-Anarana Laundry DETERGENT, hoy Kuper. Ny nandroso ny teknolojia anzima manadio ny towels na inona na inona ny rano ny mari-pana.
Tsy araka ny tokony namaoka Towels
Nahoana izany olana: Over-paharitry taorian'ny Mandroa mety hanimba ny lamba famaohana ny kofehy; namaoka towels tsy ampy mety hahatonga azy ireo hahazo mildewed.
Vahaolana: Hanombohana, isaky ny mampiasa lamba famaohana, dia azo antoka ny ahantòny fisaka rehefa afaka izany, hoy Tannen. Ny lamba ny lamba famaohana mila miaina mba rivotra-maina amim-pahombiazana. Rehefa namaoka ao amin'ny milina, tandremo tsara ny hanaraka ny toromarika eo amin'ny fikarakarana lamba famaohana, ka hanozongozona azy eo anelanelan'ny Mandroa, dia maina tsingerin'ny. Izany dia manampy ny fluff azy ka azo antoka fa tsy ny fanamainana no "vy" creases ho any aminy, hoy Tannen. Raha misy lamba famaohana fofona toy ny maty fotsy, mihazakazaka izany amin'ny alalan'ny Mandroa indroa mampiasa antsasaky ny kapoaky ny fanaova soda mba hanafoanana ny fofona.